Fooramiin Gumii Dhaabbilee Amantaa Ityoophiyaa Jimmaatti gaggeeffama jira – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Fooramiin Gumii Dhaabbilee Amantaa Ityoophiyaa Jimmaatti gaggeeffama jira
On Oct 21, 2020 62
Finfinnee, Onkololeessa 11, 2013 (FBC)- Fooramiin Gumiin Dhaabbilee Amantaa Ityoophiyaa dhimmaa nageenyaarratti bakka bu’oota uummataa fi abbootii amantii godina Jimmaa waliin mata duree ‘’Obbullummaa fi heddummina’’ jedhuun Jimmaatti gaggeeffama jira.
Fooramiichaan duudhaan amantaalee hundaa obbolummaadha, galmisaa lammii qajeelaa uumaasa sodaatu namaafi uumama hundaaf waan gaarii yaadu uumuudha jedhameera.
Kantibaa itti aanaan magaalaa Jimmaa obbo Kaasahun Duubee, hojiin gama Gumii Abboti Amantaa Ityoophiyaan tokkummaa hawaasaa ijaaruun rakkoowwan muudachaa jiran hiikuun jijjiirrama keessa jirru ceesisuufis, hojjatamaa jiru olaanaa ta’uu ibsaniiru.
Tumsi kunis gara fuulduratti cimee itti fufuu akka qabus yaadichisaniiru.
Barreessaa Olaanaa Gumii Dhaabbilee Amantaa Feedaraalaa Qasiis Taagayi Taaddalaa, lammiileen Ityoophiyaa jaalalaan waliigalanii waldhaggeffachuun, walgargaaruun, walkabajuu fi waliin jiraachuun aadaadha jedhaniiru.
Yeroo addaa addaattiis rakkoowwan hordoftoota amantaa jidduutti mul’atan mariin furuu keessatti jiraattonni godina Jimmaa fi magaalaa Jimmaa kaaniif fakkeenyaadha jedhameera.
Ijaarsi Hidha Haaromsa Guddicha Ityoophiyaa qajeeltoowwan idil addunyaa eeguun…
Godina Matakkalitti farreen nageenyaa 23 irratti tarkaanfiin fudhatame
Magaalichatti dhaabbileen 22 ol naga’eedhan ala gurgurtaa raawwata turan to’ataman
Obbo Dammaqaa Mokonnin ministira Dhimma Alaa Faransaay Zho Ivi Ladiriyoo waliin…
BBCn dubbii MM FDRI Dooktar Abiy hin dubbanne akka…
Raayyaan Ittisa Biyyaa duula marsaa xumuraa fi sadaffaan…
Hoggantoonni waraanaa olaanoon haleellaa raawwachuun…
Bulchiinsa magaalaa Sabbataa Ganda 04 Naannoo masjiidaa…
Ijaarsi Hidha Haaromsa Guddicha Ityoophiyaa qajeeltoowwan…
Godina Matakkalitti farreen nageenyaa 23 irratti tarkaanfiin…
Magaalichatti dhaabbileen 22 ol naga’eedhan ala gurgurtaa…
Oduu biyya keessaa4046